Puntland oo shaacisay 34 shirkadood oo ku tartamaya dhismaha garoonka Boosaaso (Dhegeyso) – Radio Daljir
Oktoobar 8, 2013 6:36 b 0
Garoowe, October 8, 2013 – Dowladda Puntland ayaa baahisay mashaariic lagu dhisayo garoomada diyaaradaha Garoowe, Galkacayo iyo Boosaaso, iyadoo haatan uu bilowday tartanka loogu jiro dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso.
Wasiir ku xigeenka duulista hawada ee Puntland Cabdiqani Geele Maxamed oo la hadlay radio Daljir waxaa uu sheegay in ay Puntland ka go?an tahay in la dhiso garoomada waa wayn oo idil, iyadoo si casri ah loo dhisi doono garoonka diyaaradaha ee Boosaaso.
Wasiirku waxaa uu sheegay in dhaqaalaha ku baxaya dhismaha garoomada ay keeneen dowladdaha Talyaaniga iyo Kuwait oo Puntland ka taageeraya horumarinta duulimaadka iyo adeegyo kale.
Puntland waxay sheegtay in garoonka Boosaaso ay ku tartamayaan dhismihiisa 34 shirkadood oo dhamaantood ka socda dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga, maamulka ayaa sheegay in shirkadaha gudaha aysan haysan qalab wanaagsan oo ay howsha ku qabtaan.
Cabdiqani Geele ayaa? xusay in ay dhowaan bilaabi doonaan dhismaha garoomada diyaaradaha ee Garoowe iyo Galkacayo, dowladda Kuwait ayaa qandaraas ku qaadatay in ay dhisto garoonka Garoowe iyo dhamaystirka jaamacada Maakhir ee Badhan.
Baahin: Salaasa, 8 Oct, 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Xaliimo Sacdiya Cabdilaahi Cali~ Daljir ~ Garowe